Nhungamiro yekumagadzirirwo emukati- Iyo Nyika Kurume
Tungamira pane zvigadziro zvehupenyu
musha » Tungamira pane zvigadziro zvehupenyu
Kana tichida kuisa pamusoro pewebhu imwe yematambudziko makuru atinowana ndeyekuti izvo zvandinowana hazvimbofi zvakanyatsofungidzirwa kuve zvakaiswa mukati mewebhu. Kazhinji dambudziko nderekuti kana isina kukwana dhizaini dhizaini nemadiro hazviwanzo kutaridzika zvakanyanyisa, zvichipa mhedzisiro isina kugutsikana.
Ndokusaka ndiri kuzopa dzimwe tsananguro dzakakosha dzekuti marongero ezvinyorwa anofanira kufungwa sei mumamiriro ezvinhu kuti ape basa rakareba uye kuti mhedzisiro yacho ndeyakakwana.
Chinangwa chegwaro iri ndechekuti chero munhu asina ruzivo rwekugadziridza kana webhu kuvandudza anogona kundipa chimiro uye kuti handifanirwe kushandisa nguva yakawanda ndichiedza kuburitsa pfungwa yacho kuburikidza nekukurukurirana kwakawanda kudzamara yasvika kumagumo.
Nhanho 1: Iyo template
Nhanho 2: Izvo zvirimo zvinodzivirira
Nhanho 3: Kugadzira zvirimo
Nhanho 4: Kukodzera zvirimo nemabhuroka
Bhatani, Dhairekita uye Mavara Matinji
Nhanho ye4: Tumira zvese
Notary Inokosha Yekupedzisira
Kuti uve netemplate patino “dhiza” chikumbiro chedu, zvatichaita kutora folio mu A4 uye tigoipeta neNANI THERTIUM longitudinally.
Ngatifungei kuti tine akatiwandei marudzi ezvinyorwa: vhidhiyo, mufananidzo, zvinyorwa. Imwe neimwe yemukati ndeye rexangular kana square block. Isu tinofanirwa kukwana mabhuruku kubva kumusoro kuenda kuzasi kwetemplate pakusarudza kwedu. Isu tichaenzanisira matatu emhando yezvinyorwa.
Isu tichafungidzira kuti vhidhiyo yacho ichave iri vhidhiyo yeYouTube, tinomiririra mu template seinotevera:
Zvinoenderana nekuti kana mufananidzo uri wekunyika kana mufananidzo, sezvatichabvuma.
Zvakafanana nechidhori chemufananidzo, zvichienderana nekuti isu tinoda rugwaro tinoisa sei block kana imwe. Isu tinomiririra nemitsara yakafanana.
Mavara ekuvhara anogona kuve mavara anovhara ane ndima akaiswa uye kunyange rondedzero yezvinyorwa zvemavara
Ndiri kuenda kuisa miviri mienzaniso: bhariro remavara padhuze nemifananidzo yenyika, uye imwe padyo nemufananidzo wemufananidzo:
Mazita anoenda mumabhuru akapatsanhamirwa emabhuruku anorembera anowanzogara mutsetse wese.
Kana isu tichida kuisa bhatani rekuti vanhu vapinze uye uvaendese kune chimwe chikamu chewebhu kana kungova hwindo rine rumwe ruzivo (kana fomu)
Pfungwa yacho yakafanana. Kana isu takanzwisisa mashandiro anoita mabhliro, ndinofunga isu tinogona kunyatsoisa imwe mhando yevhavha iro, rakafanana neremberi rapfuura, rinokodzera mativi kana retsi. Semuenzaniso, kana isu taida kuisa fomu rakabatanidzwa mune zviri mukati. Kunyangwe izvi kazhinji zvichinyanya kuwanda, zvirinani kubvunza usati washandisa matsva anovharwa asiri emhando dzakataurwa pamusoro apa. Ini ndichaedza kumutsiridza iyi runyorwa sezvo mazano matsva evhoti anobuda ayo anogona kufadza munhu wese.
Chekupedzisira, heino muenzaniso we template nemhando dzese dzemabhuru dzakataurwa pamusoro:
Kana isu tichida nzvimbo yakawanda, isu tinongofanira kuwedzera mamwe mapeji kune block dhizaini pazasi. Izvo hazvidikanwe kuzadza zvese pasi, asi zvakakosha kuti usasiya maburi asina chinhu kubva kumusoro kusvika kuzasi pakati peganda rega. Nenzira iyi tinogona kuwedzera peji:
Izvozvi nekuti isu tave nekurongedza zvirimo nemabrood uye mhando dzezvidhinha zvakakodzera kuti tigadzire izvo zvichaenda mumabhuru iwowo. Nhanho ye3 inochinjika neiyo 2 nhanho. Mune mamwe mazwi, tinogona kugadzira izvo zvirimo zvisati zvaitika, tobva tarongedza tichiziva huwandu hwe zvemukati zvatiri kuda kubatanidza. Hazvizivikanwe kuzviita nenzira imwechete kana imwe, asi isu tinofanira kuziva kuti izvo zvirimo zvinofanirwa kukwana mukati medu zvakarongeka nenzira kwayo
Isu totevera muenzaniso wapfuura. Mumufananidzo we4 tinogona kuona mabhuroka anotevera:
2 Musoro Mabhloko
4 Matema Emavhiki
1 Vhidhiyo Vhiki
2 Mifananidzo Inovhara
1 Bhatani Bhatani
muunganidzwa: 10 Mabhokisi
Naizvozvo isu tichafanirwa kugadzirisa zvatiri kuitira kuti zvinyatsoenderana mune izvi zvidhinha pasina kusiya uye kuti font size yakafanana chaizvo mune dzese. Nekuti izvo zvinogoneka zvine basa nazvo gadzira zvirimo kutanga wobva wazvivhara. Zvinototsamira kwazvo pamunhu.
Ngatifungei kuti isu tatova neyakagadzirwa dhizaini papepa uye zvese zvirimo zvidhinha zvakagadzirwa. Iye zvino danho rekupedzisira kurisanganisa. Kune izvi isu tinoshandisa zvishandiso zvakati kuti kusanganisa zvese uye tumira kune webhu saiti.
Mavhidhiyo anogona kupfuurwa nenzira mbiri:
Mune MP4 vhidhiyo fomati kuburikidza nechishandiso chakaita WeTransfer.
GADZIRIRA KUSVIRA: Kuvaisa kune yeYouTube March chiteshi uye kupfuura paYouTube link kune vhidhiyo.
Kana paine vhidhiyo imwechete chete mune yacho panga pasina dambudziko. Asi kana paine mavhidhiyo akati wandei isu tichafanira kuvabatanidza neimwe nzira nemaitiro atakaita papepa.
Semuenzaniso. Fungidzira kune mavhidhiyo matatu. Mukugadzika isu tinodhonza nhamba ye1 muvhidhiyo yekutanga, nhamba ye2 muvhidhiyo yechipiri uye nhamba ye3 muvhidhiyo yechitatu. Uyezve kana tichitumira zvinyorwa zvese isu tichaisa chimwe chinhu chakadai:
Vhidhiyo 1: Vhidhiyo yemazwi asingadiolence ane musoro: "Mitsara yakakosha yekusazvibata"
Vhidhiyo 2: Vhidhiyo yemavara emireza ine zita rekuti: "Mureza wekusavimbika"
Vhidhiyo 3: Vhidhiyo nezveboka riri kuenda kuArgentina nezita rekuti: “Chikwata cheArgentina”
Izvi zvichaita kuti zvive nyore kuziva kuti ndeipi vhidhiyo inoenderana nechikamu chimwe nechimwe.
Muchiitiko ichi, mifananidzo yese inofanirwa kuiswa kune IMGUR platform: https://imgur.com/upload
Uye wobva wapfuudza zvinongedzo kune izvo zvifananidzo. Izvo zvakanakisa kuisa iyo mifananidzo seayo mavhidhiyo, akaiswa chiratidzo ne1, 2, 3 uye zvichingodaro. Semuenzaniso, ngatifungidzirei kuti tine 4 mifananidzo iri mukuenda muSouth Africa. Iwo mana anonzi akafanana: "sudafrica.jpg". Ipapo tinobva taisa mazita anoteerana kusvika padhuze pavanenge vari muchimiro nekupenda nhamba iri pabepa ravanonyorerana. Muenzaniso:
Chekupedzisira, aya mabhuruku anofanira kunyorwa muIzwi Gwaro, kana muGoogle Docs zviri nani.
Chimiro chiri nyore kwazvo: Mugwaro reIzwi tinoisa mhando yeBlock (Musoro, Bhatani, kana Chinyorwa) inoteverwa nehuwandu hwayo iyo inoenderana muchimiro.
Ipapo ini ndinoisa gwaro remuenzaniso nemavara asina kujairika kuitira kuti zvioneke kuti izvi zvingagadzirwa sei, zvichitevera muenzaniso weiyo 4 mufananidzo:
Aya ndiwo maratidziro anofanira kutaridzika kana tamboisa manhamba anoenderana nechikamu chimwe nechimwe.
Kana tangoita zvese, iwe uchangotumira kune munhu anozotarisira mamirire acho
Sketches pabepa rine maitiro
Vhidhiyo inobatanidza neYouTube kana WeTransfer
IMGUR zvinongedzo zvemifananidzo
Chinongedzo kugwaro muGoogle Docs kana iro reShoko faira
Iyo yakanakira pakupedzisira ichave yekubatanidza mufananidzo wakasarudzika ndiyo ichaenda neMusoro 1 musoro wepeji. Ndokusaka Musoro 1 uchifanira kugara uchiwonekwa pakutanga.
Mufananidzo wemusoro unofanirwa kunge uine saizi ye960 x 540 pixels. Ichi chifananidzo chinogona kutumirwa sezvakaita mimwe mifananidzo, neIMGUR
Uye pakupedzisira neruzivo rwese urwu, peji racho raizoiswa kumusoro. Kutevera uye kupedzisa nemuenzaniso uyu, iyo peji ine mhedzisiro yekupedzisira inotevedzera paramita dzese dzatakasimudza kare dzaizove izvi: